MINISITERAN’NY SERASERA : Manome fe-potoana ireo haino aman-jery tsy manara-dalàna
Fantatra fa ny 92%n’ireo fahitalavitra sy onjam-peo eny anivon’ny Faritra no mbola tsy manara-dalàna amin’izao rehefa nisy ny fitsirihana natao. 13 juin 2019
Manoloana izany dia manome fe-potoana iray volana ho azy ireo ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina. Takiana amin’izy ireo ao anatin’io ny hikarakarana ho ara-dalàna ireo antontan-taratasy rehetra ahafahan’ilay haino aman-jery manohy ny fisokafany. Ao aorian’io fe-potoana io dia hisy ny fepetra hentitra horaisin’ny minisitera raha misy amin’ireo haino aman-jery voakasika no minia manampin-tsofina.
“Rehefa nanao fanamarihana izahay dia tsapa fa betsaka ireo radio sy televiziona eto Madagasikara no mitsangana amin’ny fomba tsy ara-dalàna. Izay no nahatonga ny minisitera nanapa-kevitra hoe aleo ireo lehiben’ny onjam-peo sy fahitalavitra mihitsy no miteny aty amin’ny minisitera hoe izao no dingana nataonay tamin’ny nanangana ity radio sy televizionina ity. Omena hatramin’ny 10 jolay ireo radio rehetra manerana ny Nosy sy fahitalavitra rehetra manerana ny Nosy mba hampiseho aty amin’ny minisitera an’ireo antontan- taratasy rehetra efa any aminy”, hoy ny fanazavana noentin’ny tale jeneralin’ny serasera eo anivon’ny minisitera, Fanahimana Tiaray.
Nohazavainy fa maro ireo dingana tsy maintsy arahina mialoha ny ahafahan’ny haino aman-jery iray misokatra. Maro amin’izy ireo anefa no tsy manaraka izany fa mionona amin’ny fahazoana ny mari-drefy na “frequence” sy fahazoan-dalana na “licence” fotsiny dia misokatra.